5 Apple Store muChina ichavhura madhoo ayo mangwana | Ndinobva mac
5 Apple Store muChina ichavhura madhoo ayo mangwana
All Apple Stores, makumi mana nemasere, iyo Apple yakagovera kuChina, yakavhara mikova yavo kutanga kwaKukadzi nekuda kwecoronavirus, coronavirus iyo yave iri mhosva yekukanzurwa kweMWC, huru kwazvo nharembozha. Pakutanga, Apple yakaronga kuvhura zvekare munaFebruary 10, asi O'Brien akazivisa kuti ari kunonoka musi iwoyo.
Sekureva kweReuters, Apple inoronga kutanga kuvhura mamwe maApple Stores ayo akapararira muChina, kunyangwe panguva ino maawa mashoma pazuva, kubva 11am kusvika 6 pm, pachinzvimbo cheyakajairwa (10 kusvika 22). Parizvino zvitoro zvishanu chete zvichavhura, zvimwe zvese zvicharamba zvakavharwa.
Apple inoti pawebhusaiti yayo kuti nekuda kwehutano hweveruzhinji nekudzivirira, zvimwe zvezvitoro zvacho zvicharamba zvakavharwa. Anokurudzirawo vatengi kuti kana vakaronga kushanyira zvimwe zvezvitoro zvishanu zvichavhurika parizvino, ita saizvozvo. ine mask yekuvhiya uye kushandira pamwe apo vashandi vanokukumbira kuyera tembiricha yemuviri.
Iyo coronavirus haina kungobata zvitoro zveApple chete, asi iri kukanganisawo kugadzirwa kwemidziyo yayo, nekuti mazhinji mafekitori akavharwa, kunyangwe vanoronga kuvhurazve mumazuva mashoma anotevera uye kuisa vashandi vese kumatanho akasiyana ehutano kudzivirira hutachiona.
Kugadziridzwa munzira yekuverenga yezviitiko zvecoronavirus yapfura vanhu vanodarika chiuru nemazana matatu vachikonzerwa nehutachiona uhwu hwakabhabhatidzwa saCovid-1.300, ichisimudza nyaya dzekutapurirana kusvika kumakumi matanhatu ezviuru muChina chete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » 5 Apple Store muChina ichavhura madhoo ayo mangwana
MuUS unogona kutenga yakadzoreredzwa 16 ”MacBook Pro